ကလေး ဝေလငါး Potty အလုပ်ရုံ စိတ်ကြိုက် နှင့် လက္ကား - Wahsun နောက်ဆုံးပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မိခင် နှင့် ကလေး ထုတ်ကုန် > ကလေး Potty > ကလေး ဝေလငါး Potty
အဆိုပါ ကလေး ဝေလငါး potty ဖြစ် လုပ် ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေ plush ပစ္စည်း, အရာ ဖြစ် ကျန်းမာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖော်ရွေ, s၏t နှင့် အဆင်ပြေ, ဒါကြောင့် ထို အဆိုပါ ကလေး နိုင် ထိုင် အငြိမ့်။ အရ သို့ အဆိုပါ Erသွားnomics ပုံစံ ၏ အဆိုပါ ကလေး, အဆိုပါ ကလေး ဝေလငါး potty အားပေးခြင်း အဆိုပါ ကလေး's လွတ်လပ်သော အလားအလာ, အဆိုပါ ဓလေ့ထုံးစံ ၏ အဆိုပါ လွတ်လပ်သော ရေချိုးခန်း, ကြောင့် အဆိုပါ ကလေး နောက်ထပ် အဆင်ပြေ သို့ အသုံးပြု နှင့် exercဖြစ်es အဆိုပါ ဓလေ့ထုံးစံ ၏ အဆိုပါ ကလေး သို့ သွား သို့ အဆိုပါ သို့ilet.
ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း:သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး plush ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူကျန်းမာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, ပျော့နှင့် comfortable.Safety, နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေစေရန်။ ချောမွေ့ burrs ခြင်းမရှိဘဲ, ကလေး, ကလေးရဲ့ Ergonomics ဒီဇိုင်းကိုမှ on.According ထိုင်ကလေးရဲ့လွတ်လပ်သောအလားအလာလှုံ့ဆော်, လွတ်လပ်သောအိမ်သာအလေ့အထများ, ကလေးကပိုအဆင်ပြေကိုအသုံးပြုဖို့ပါစေရန်အဘို့အကအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, အိမ်သာသွား၏ကလေးရဲ့အလေ့အထကိုလေ့ကျင့်။
-Keep သင်နွေး, ဒါပေမယ့်လည်းတင်ပါးနဲ့အဆင်ပြေ, သွေးလှည့်ပတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ရာထူးတိုး။
ကလေး Whale Potty
* 33CM 35 * 30 ရက်
လက်မှတ် 1375PCS / 2875PCS / 3380PCS
3 လ ~4နှစ်သမီးအရွယ်ကလေး
1. Friendly ချစ်စရာအသွင်သဏ္ဌာန်ကလေးငယ်မှဆွဲဆောင်သူတို့ကိုလိုလိုလားလား potty go ဖိတ်ခေါ်
2. အဆိုပါပျော့ခေါငျးအုံးအဆိုပါအတောအတွင်းအတွက် ITA လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ forasy သန့်ရှင်းရေးမယ့်အခါ potty လေ့ကျင့်ရေးသင့်ကလေးကိုသက်သာခံစားရကူညီပေးသည်
1pc / ctn, PP အိတ် + စက္ဏူထူ
hot Tags:: ကလေး ဝေလငါး Potty, စိတ်ကြိုက်, စက်ရုံ, လက္ကား, ပူသော ရောင်းချခြင်း, မူပိုင်ခွင့်, နောက်ဆုံးပေါ်, dueable, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အနိမ့် စျေးနှုန်း
ကလေး Little က ဝေလငါး Potty
foldable မီးဖိုခန်း အစာ အသီး ပေါင်မုန့် မီးဖိုချောင်းသုံး ခေါက် ပလပ်စတစ် တောင်း
ပလပ်စတစ် ခေါက် စျေးဝယ် တောင်း နှင့် လက်ကိုင်
ပလပ်စတစ် စျေးဝယ် တောင်း နှင့် လက်ကိုင်